V12 အင်ဂျင်နဲ့ Aston Martin DB9 က ဘာလို့အရမ်းထူးခြားနေရတာလဲ? | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
V12 အင်ဂျင်နဲ့ Aston Martin DB9 က ဘာလို့အရမ်းထူးခြားနေရတာလဲ?
Aston Martin ဆိုတာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ လောက်ကတည်းက ကားကောင်း ကားသန့်တွေကို ထုတ်လုပ်လာတဲ့ ကမ္ဘာကျော် Automobile Brand တစ်ခုဖြစ်ပြီး သက်တမ်းရင့်တဲ့ ကားကုမ္ပဏီတွေထဲက တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ဒီလို ကားအစီးရေ နည်းနည်းနဲ့ Sports Car တွေ သီးသန့်ထုတ်တဲ့ Aston Martin က ဘာလို့ နာမည်ကြီးပြီး နှစ်ရှည်လများ ရပ်တည်နေနိုင်ရတာလဲ? ဘာလို့လဲဆိုတော့ Aston Martin ရဲ့ကားတွေက အမြဲတမ်း ထူးခြားမှုတွေပါဝင်နေပြီးတော့ အင်္ဂလန်က တော်ဝင်မိသားစုတွေတောင် ကြိုက်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး Aston Martin ဟာ James Bond နဲ့ လက်တွဲခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းက ၅၀ ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ 1964 ခုနှစ်မှာရိုက်တဲ့ James Bond ရဲ့ ပထမဆုံး ဇာတ်ကား “Goldfinger” မှာဆိုရင် Aston Martin ရဲ့ DB5 မော်ဒယ်ကို အသုံးပြုရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အောင်မြင်မှုတိုင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ကျရှုံးမှုတွေက ရှိနေဆဲပါပဲ။ Aston Martin ဟာ Supercar တွေ၊ Sports Car တွေကို သီးသန့်ထုတ်တဲ့အတွက် တော်ဝင်မိသားစုတွေနဲ့ သူဌေးကြီးတွေလောက်ပဲ ဝယ်ယူနိုင်ကြပါတယ်။
ကားထုတ်လုပ်တဲ့ အစီးရေကလည်း နည်းတော့ ကားတွေထပ်ထုတ်ဖို့ ပိုက်ဆံမရှိတော့ဘဲ ကုမ္ပဏီပျက်မလိုတောင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် နာမည်ကြီး ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ford နဲ့ လက်တွဲပြီးတော့ ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ရတာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ Aston Martin ဟာ Formula One ကားပြိုင်ပွဲအတွက် Aston Martin Formula One Team ကိုဖွဲ့စည်းပြီး 2021 ခုနှစ်စ၍ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရင့်ဆုံးကားတွေထုတ်လုပ်တဲ့ Aston Martin Lagonda ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ DB9 ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားလေးဟာဆိုရင် V12 အင်ဂျင်သုံးထားပေးပြီးတော့ 5,935cc အထိရှိတဲ့အတွက် လီဗာနင်းလိုက်တာနဲ့ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်က တခြားဘယ် Supercar မှာမှ မရနိုင်ပါဘူး။
4.6 စက္ကန့်အတွင်း 62mph မောင်းနှင်နိုင်ပြီးတော့ 183 mph ထိအမြန်နှုန်းတင်မောင်းနိုင်ပါတယ်။ တခြားနာမည်ကြီး Sports ကားတွေ အများကြီးကြားထဲကမှ Aston Martin DB9 ကိုရွေးချယ်ကြတဲ့အကြောင်းရင်း က V12 အင်ဂျင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ V12 အင်ဂျင်ကို DB9 နဲ့တန်ဖိုးတူ ဘယ် Sports ကားတွေမှာရှာရှာ ဘယ်လိုမှရှာလို့တွေ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ V12 အင်ဂျင်က DB9 ရဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါ။
Aston Martin DB9 မှာ4Seats ပါဝင်ပြီးတော့ Ferrari တို့ Lamborghini တို့လို ထိုင်ခုံနေရာက မကျဉ်းတာကြောင့် DB9 ကိုမောင်းတဲ့အခါမှာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမှာ လုံးဝအသေချာပါပဲ။
ထိုင်ခုံနေရာ ကျယ်ဝန်းတာကြောင့် ခုံကိုစိတ်ကြိုက် အတိုးအလျော့လုပ်နိုင်ပြီး မောင်းနှင်ရတဲ့ ခံစားချက်ကို အပြည့်အဝ ခံစားရမယ့်အပြင် လီဗာနင်းလိုက်တိုင်းမှာ ကြားနေရမည့် V12 အင်ဂျင်ရဲ့အသံ နဲ့ Exhaust တို့ရဲ့အသံဟာ Aston Martin DB9 ရဲ့ ထူးခြားချက် သို့မဟုတ် တစ်နည်းအားဖြင့် DB9 ရဲ့ အသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
DB9 Supercar ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့အညီ Steering ကလည်း On-Road Handling ကိုလုံးဝ စိတ်ကြိုက်တွေ့နေစေမှာပါ။ Aston Martin DB9 ကို Highway မောင်းတဲ့အခါမှာလည်း ဉရောပကားပြီပြီ Weight Distribution ပြည့်ဝနေပါတယ်။
Aston Martin DB9 ရဲ့ ဒီဇိုင်း အချိုးအကွေ့၊ အဆစ်အချိုးကဟာ ဘယ်တော့မှရိုးမသွားမယ့် ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ အတော်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ Supercar တစ်စီးပါ။ Timeless Classic ဖြစ်လို့ အချိန်မရွေး နေရာမရွေး အာရုံစိုက်ခံနေရမယ့် ကားကောင်းကားသန့်လေးပါ။
အနုပညာဆန်တဲ့ ဒီ Aston Martin ကို ဝယ်ယူချင်ရင်တော့ 09420071336 နဲ့ 09420077943 ကိုဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး DB9 ဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးတဲ့သူအရေအတွက်က မရှိသလောက်ပါပဲ။
အရှေ့တောင်အာရှ မှာဆိုရင်တောင် လက်ရှိ DB9 ရဲ့ တန်ဖိုးက မြန်မာငွေဈေးနဲ့ဆိုရင် သိန်း ၄/ ၅ ထောင်လောက်ပေါက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Myanmar Automobile Guide ဝက်ဘ်ဆိုက် ရဲ့ ကားအရောင်းအဝယ်ကဏ္ဍ မှာဖော်ပြထားတဲ့ V12 အင်ဂျင်နဲ့ DB9 ကတော့ သိန်း ၂ ထောင်မို့လို့ အရမ်းတန်ပြီး လက်လွှတ်မခံသင့်ပါဘူး။
Aston Martin DB9 (Grey)
Engine Power: 6.0 V12
Mileage: 14,880 KM Only
Fuel: Benzine (95 Super Leaded)
Price: 2,007 Lakhs